Esigabeni sezimoto ezincane zezentengiselwano zendawo ekhethekile ethathwe yi-vans yonke-insimbi. Le mishini, kuye ngokucushwa, ingasetshenziselwa ukuthutha kwezimpahla, abagibeli noma isetshenziselwa ukuhlukahluka kwezimpahla kanye nomgibeli. Okubaluleke ngokukhethekile ukusetshenziswa kwale mishini ezindaweni zasemadolobheni, lapho ezimweni eziningi kuvinjelwa ukuhamba kwamaloli, izimoto ezinkulu.
Ukuhlukaniswa kwazo zonke izinsimbi zensimbi
Ngokuvamile, embonini yezimoto, kuwumkhuba wokwenza ama-vans ayingqayizivele futhi akhethekile. Amandulo asetshenziselwa ukuthutha izimpahla ezihlukahlukene ngaphandle kwezimo ezikhethekile. Lezi vane zivikela imithwalo yemvula nokulimala komshini, ingaba itende noma ikhiqizwe njengama-vans yonke-insimbi.
Amamodeli akhethekile avame ukuhlanzwa imishini yokuqhaqhazela ukuthutha izimpahla ezingasheshe ziwohloke (ikakhulukazi imikhiqizo). Ukuthutha okunjalo kungakhiwa ukuthutha imikhiqizo yokupheka kanye ne-confectionery, izingubo, ifenisha, njll.
Embonini yezimoto zomhlaba, zonke izinsimbi zensimbi zezinkampani ezilandelayo zikhiqizwa: Citroen FIAT, Peugeot, SEVEL. Laba bangabakhiqizi bangaphandle. Ukusuka ekufuyweni kufanele kubone UAZ, GAZ, MAZ, VAZ. Ake sicabangele ngokuningiliziwe ummeleli wembonini yemoto yasekhaya.
Vans uchungechunge lwezinsimbi zonke GAZelle "Okulandelayo" - lesi esinye isinyathelo sembonini yemoto yasendlini endleleni eya emakethe yaseYurophu yemoto. Amashini ale fomethi embonini yemoto okwamanje ayengeyona: injini enhle yomlilo yangaphakathi, igumbi elibanzi, imishini yesimanje isetshenziselwa ukusetha okuphelele. Okujabulisayo ikakhulukazi izindleko zokuncintisana zemoto.
Uma ucabangela izinqola zensimbi zonke, amanani ahlukahluka kusuka ku-ruble kuya kwezigidi ezimbili noma ngaphezulu, usafuna ukukhetha ngokuqondene nomkhakha wezimoto zasendlini. Naphezu kokushiya ngemuva kwabakhiqizi bezwe, izimoto ezifuywayo zihlukaniswa nezimo zaseRussia, ukuzimela ngaphandle kwezithintelo zezingxenye kanye nenani elilinganayo lokugcinwa nokulungiswa kwemoto.
Umlando wokubukeka kwemoto uGAZelle "Okulandelayo"
Naphezu komlando omfushane walomshini, i-GAZEL Elandelayo yaqala ukhiqizwa esikhundleni se-model. Kanye nemoto yangaphambilini, imoto isenze izinguquko zanamuhla futhi yenza ukuncintisana okuphezulu kwamakhansela angaphandle, njengoba kuqinisekiswa namuhla.
I-GAZelle "Okulandelayo" ibonakale ngaphambi komthengi okokuqala ngo-2012, ngonyaka olandelayo izimoto zangena kwinethiwekhi yokuthengisa yokudayisa. Imoto imakiwe ngokuphawulekayo kuzo zonke izici eziyinhloko. Lo mfanekiso awusizo kuphela emakethe yasekhaya yezwe, kodwa futhi ngaphandle kweRussian Federation. Ukukhiqizwa kwezithombe ze-GAZelle "Okulandelayo" kwamanye amazwe (isibonelo, i-Great Britain) yasungulwa.
I-Gazel "Okulandelayo" - i-van ensimbi yonke, intengo yayo eya kuma-ruble ayizigidi ezingu-1.3, umncintiswano wemoto ye-Ford Transit, okuyizindleko eziphindwe kabili, okuyi-ruble engaphezu kwezigidi ezimbili. I-Vans Volkswagen neMercedes nayo ibiza ama-2 million, kuyilapho i-Renault nePeugeot bebiza cishe izigidi ezingu-1.8. Kuze kube manje, abathengi bavota nge-ruble, ngakho amathuba okuphumelela kwe-GAZelle entsha Okulandelayo ngenguqulo ye-CMF (yonke insimbi UVan) kuhle kakhulu. Kusalindelekile ukuthi izinkampani ezifuywayo zizogxila kubakhiqizi baseYurophu nabangaphandle, bamukele konke okumele kudingeke: ukuthembeka, induduzo, ukugcinwa okungabizi okwedlulele ngesikhathi sonke sokusebenza.
Kuyini leukocyte? abavikeli Small umzimba
Honda CBR 250: Ukucaciswa, ukubuyekezwa
I-Cystitis: yimuphi udokotela ophatha lesi sifo kwabesifazane?
Oskar Kuchera: Biography, umndeni, izingane